sesamol （533-31-3） Mugadziri wekutsigira fekitori
Sesamol ndeye yakasikwa phenolic complate, yakakosha lignan, inobviswa kubva sesame (sesame) uye sesame mafuta; uye iyo yakaenzana yezvinyorwa zveesame mune sesame ndiyo yakanyanya kukwirira, iri chena sekristaro yakasimba, Is derivative of phenol. Iyo inogadziriswa zvishoma mumvura, asi miscible nemafuta mazhinji ..
Sesamol powder Base Ruzivo
zita Sesamol upfu
Molar uremu 138.12 g / mol
Melt Point 62 kusvika 65 ° C (144 kusvika 149 ° F; 335 ku338 K)
Kubikira pfungwa 21 kusvika 127 ° C (250 kusvika 261 ° F; 394 kusvika 400 K) pa5
Sesamol yakasikwa phenol komputa inowanikwa mune yakagadziriswa sesame mafuta uye yakakangwa mbeu yesame. Sesamol (CAS 533-31-3) inoonekwa seyakakosha inoshanda uye ine simba simeame oiri inobata mukurapa kwayo.
Sesame (Sesamum indicum) yakakosheswa mafuta mumhuri Pedaliaceae. Inoonekwa seimwe yemafuta ekare-kare anozivikanwa uye anoshandiswa nemunhu kwete chete kukosha kwayo kwehutano asiwo kukosha kwemushonga. Izvo zvikamu zvikuru zveesame zvinopa kurapa kukosha mashizha nemafuta embeu.
Sesamol 533-31-3 makemikari anowanikwa mune akateedzana zviyero kunze kwemamwe lignin macomputer eesame mafuta, sesamin uye sesamolin. Iyi yakasanganiswa nemvura inoonekwa seyakasimba antioxidant.
Sei sesamol work?
Sesamol inoshanda nenzira dzakasiyana dzekupa yakakura kurapa mabhenefiti senge neuroprotection, antioxidant mhedzisiro, anti-kuzvimba, anti-bundu, anti-radiation uye radical scavenging mhedzisiro.
Pazasi pane mamwe ma modes umo sesamol inoshanda kuzadzisa zvataurwa;
I. Inodzivirira kukuvara kweDNA nekushushikana nekushushikana
Sesamol inogona kutadzisa DNA kukuvara nemwaranzi-inokonzera kushungurudzika. Ionizing radiation inokanganisa maseru eDNA nekukonzera chromosomal aberrations uye micronuclei mumasero anowedzera.
II. Inokurudzira chiitiko cheakakosha antioxidants
Sesamol inoshanda nekukwirisa-kugadzirisa zviitiko zvakakosha zveantioxidant enzymes senge catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), uye glutathione peroxidase (GPx), iyo inofambisirwa nematanho akawedzera ekuderedzwa kwegutathione (GSH). Aya ma enzyme anotamba akakosha ekudzivirira kukuvara kwemaseru nema radicals.
III. Inhibits pro-apoptotic protein saka inowedzera kushanda kwesero
Pro-apoptotic mapuroteni mapuroteni anosimudzira kufa kwesero. Zvinosanganisira p53, caspase-3, PARP, uye Ma enzymes akashata. Aya ma enzymes anobatanidzwa mukugadziriswa kwesero kufa saka kunogona kudzora kushanda kwemasero.
Sesamol yakaratidzirwa kusimudzira kugona kwesero nekudzivisa zviitiko zvepro-apoptotic enzymes.
IV. Kuvhiringidzika kwe lipid peroxidation
Lipid peroxidation imhando yekudzora lipid kunoitika nekuda kweiyo oxidation. Izvi zvinoguma mukuumbwa kwemaaldehydes anoshanda, akadai se malondialdehyde (MDA) uye 4-hydroxynonenal (HNE) inokonzeresa kukuvara kwesero. Sesamol yakaratidzirwa kudzivirira lipid peroxidation nekudaro inopa dziviriro kumasero.
V. Inotadzisa chizvarwa chemahara radical inosanganisira hydroxyl radicals
Mahara radicals ari asina kugadzikana makomputa ayo ane hukama nezvirwere uye kuchembera. Hydroxyl radicals ndiyo yakasimba kwazvo maokisheni anokonzera kurwara.
Sesamol inoderedza chizvarwa chemahara radicals anosanganisira hydroxyl, α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (DPPH), uye ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) zvine mutsindo.
VI. Inonatsiridza yakakura yekuparadza chiitiko
Kunze kwekutadzisa chizvarwa chemahara radicals, sesamol inokwanisa kudzima mahara radicals senge hydroxyl, lipid peroxyl uye tryptophanyl radicals.
VII. Kudzvinyirira kwemaseru ekuputira
Sesamol inodzivisa nzira dzekuratidzira dzinobatanidzwa mukugadzirwa kwemhando yemhando yemhando nekudaro inodzora mhinduro yekuzvimba.
VIII. Inoderedza kupisa cytokines (TNFcy, IL-1β, uye IL-6)
Nitric oxide, inogadzirwa neNOS, inotungamira kuzvimba kwemapapu nekumutsa ekupisa cytokines, senge TNFcy, uye nekuvandudza mhinduro yekuzvimba. Sesamol inokwanisa kudzivisa kuburitswa kweTNFcy uye IL-1β.
IX. Kusungwa kwesero kukura pazvikamu zvakasiyana
Sesamol yakaratidzirwa kukurudzira maseru kukura kusungwa pane akasiyana maseru ekukura maseru anosanganisira iyo S chikamu uye G0 / G1 chikamu. Sesamol anti kenza zvimiro saka zvinobatsira, semuenzaniso, kudzora gomarara sero kukura.
X. Kushanda kwecaspase nzira
Iwo macaspase ma enzymes anobatanidzwa muchirongwa chakafa sero. Sesamol yakaratidzirwa kumutsa nzira idzi nekudaro inotungamira kune cancer cancer sero kufa.
XI. Inokurudzira apoptosis kuburikidza neyemukati uye yekunze nzira
Apoptosis chiitiko chemuviri umo kurongeka kwema cell kufa kunoitika. Icho chiitiko chakakosha nekuti chinobatsira muviri kubvisa masero akafa.
Sesamol inokwezva apoptosis munzira mbiri dzakasiyana, iyo yekunze uye yekunze nzira.
XII. Inodzivirira mitochondrial autophagy
Mitochondrial autophagy ndeimwe mhando yekushatiswa iyo inobatsira kubvisa isina kukwana mitochondria.
Kana sesamol ichitadzisa iyi maitiro, ipapo apoptosis inoitwa.
XIII. Inoderedza nitrite uye neutrophil mazinga
MaNitriti uye neutrophils anotamba chikamu mukupindura kwekupokana. Ivo vanobatanidzwa mukuburitswa kweNitric oxide iyo inopindirana nehutachiona mhinduro nekukonzera kana neimwe nzira ichidzivirira kuzvimba.
Sesamol inoita basa seanorwisa-kuzvimba mumiririri nekuderedza iwo mazinga eitititi uye neutrophils.
Chii sesamol yakashandiswa?
Sesamol inoshandiswa kune akasiyana hutano mabhenefiti anosanganisira;
i. Yakakwira BP.
Sesame mafuta anoshandiswa pamwe chete nemashoma eropa madhiragi semushonga unoratidzwa kuti udzikise BP.
Kutsvaga kwakawanda pamusoro peesame mafuta kunoratidza kuti sesamol uye sesamin (lignans inowanikwa mune sesame mafuta) inoita basa rakakura mukugadzirisa BP. Kutora sesame oiri, kunyanya uchibika nayo, kwemavhiki matatu kunodzikisa kukwira kweropa kune vanhu vane hypertension kune zvakajairwa.
Munguva yekutsvagisa, varapi vakaisa boka revarwere vane hypertensive kumishonga (Procardia, Nefedica naAdelta) kwemazuva makumi maviri nerimwe. Kunyangwe paive nekuderera kudiki mukumanikidza kweropa, zvakange zvisina kujairika. Sesame mafuta aishandiswa sekutsiva mishonga, uye varwere vakaedzwa mushure menguva imwe chete. Mhedzisiro yacho ndeyekuti BP yavo yaive yadonha kuita senguva dzose.
Vanachiremba vakapokana kuti mhedzisiro yacho yakapihwa zvakanyanya neiyo yakawanda huwandu hwesamol uye sesamin mune yakabikwa sesame mafuta. Kana izvi zvakawanikwa kuti kusanganisira mafuta esesame mukudya kwevanhu vane BP zvakanyanya zvinogona kushanda kupfuura kuvapa mishonga.
Mhedzisiro iyi yakataurwa kuAmerican Heart Association panguva yemusangano wepagore weInter-American Society yeHypertension naPurofesa Devarajan Sankar weAnnamalai University, India.
ii. Kuvharika muura.
Kutsvagurudza pamusoro pemhedzisiro yesesamol pane kuvhara kwemukati kunoratidza kuti inogona kunge iri nani zvakanyanya kupfuura aspirin. Pane ongororo nezve ulcerative colitis, iyo IBD (yekuzvimba ura chirwere), iyo inokonzeresa kukuvadza kune mucosal tishu kuburikidza nekukanganisa iyo yekuzvimba system Mune chidzidzo chinosanganisira makonzo, sesamol yakawanikwa ichideredza zviitiko zvema enzymes anokonzera kuzvimba.
Kunyangwe asipurini inozivikanwa kuti inonyatso kuuraya kusagadzikana kwekuzvimba kana ikamwa, inogona kutungamira mukukura kwemaronda mukushandisa kwenguva refu. Aspirin inokonzeresa kukuvara kwemimba nekupfeka maseru.
Kumwe kutsvagurudza kunoratidza kuti nasogastric intubation yesesamu mune varwere vanotambura nediki diki ura kuvharika pamwe neyakajairika kutarisirwa kunodzora mikana yekuvhiyiwa.
iii. Chirwere chemoyo.
Njodzi zvinhu zvinokonzereswa nezvirwere zvemoyo nemoyo zvine chikamu chakakura mukufa kwepasi nekurwara. Zvinogona kutungamira mukushushikana kweiyo oxidative uye kana ikasarapwa ikawedzera kuwedzera mukugadzirwa pf inogadziriswa okisijeni marudzi, kusanganisira akanganisa antioxidant defense system.
Sesamol inoshandisa anti-oxidative zvivakwa kudzvinyirira atherosclectoric yemoyo hosha yezvirwere zvine njodzi sehypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, yakanyanya kuwanda kwepasi-density lipoprotein cholesterol uye yakadzika yakakwira-density lipoprotein.
Kumwe kuferefeta kwakagumisa kuti sesamol ine membrane inodzikamisa uye lipid yekudzikisa mhedzisiro. Zvakare, inopa chengetedzo kune myocardium kurwisa DOX-inosimudzira cardiomyopathy.
IV. Kukura kwemwana.
Sesamol inoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekukura kwevana. Mune zvidzidzo zvakasiyana, sesamol inoshandiswa kudzikisira ADHD muvana vakaremara nepfungwa yakanzi inoshanda zvishoma kana ikashandiswa muhuwandu hushoma. Kushayikwa kweDHA kunowanzoitika kune vana vane ADHD.
Kunze kwekutsvagisa gumi kunoratidza mabhenefiti akanaka muADHA zviratidzo zvinosanganisira mukuverenga izwi, kusagadzikana, kudzidza kunoonekwa, kushanda ndangariro, uye kusagadzikana.
Vacheche vakapwanywa pasamefuta kwemavhiki mana vakanyora kukura nekukura kwemuviri.
v. Chirwere cheshuga.
Sesamol inoshanda zvinobudirira sekuwedzera kune chirwere cheshuga kudzikisa mashuga eropa nekukurumidza. Kutora sesamol zvinowedzera kana kuchinjira kuchikafu cheesame mafuta uchiri nechirwere cheshuga mishonga inopa goho riri nani pabasa.
Mune tsvakurudzo dzinoverengeka, dzakawanda dzinosanganisira varwere vechirwere cheshuga cheshuga, sesamol yakaratidza mibairo mikuru. Chimwe chezvidzidzo chaisanganisira mapoka matatu, rimwe nerimwe richirwara nechirwere cheshuga cheshuga. Rimwe boka rakaiswa sesamol roga, rimwe kumushonga wezuva nezuva we glibenclamide (Glyburide), uye yekupedzisira kune ese sesamol uye Glyburide kwenguva ingangoita evhiki nomwe.
Sesamol yakanzi ine synergetic mhedzisiro ine glyburide, sezvo kurapa kwakabatanidzwa kwakadzora ese hemoglobin A1c uye mashuga eropa zvakanyanya, uye zvirinani kupfuura imwe yemishonga imwe chete.
Hyperlipidemia. Vatsvagiri vanotaura kuti sesamol inoshandiswa kupisa cholesterol nemamwe lipid muropa yakapa mhedzisiro. Mumuedzo wemuenzaniso, kushanda kwesesamol kwakaedzwa pane yakakwira-mafuta kudya-inosimudzira hyperlipidemia, isingagumi hyperlipidemia, hypercholesterolemia, uye acute hyperlipidemia.
Yakadzikira matatuacylglycerol mazinga semhedzisiro mhedzisiro yakaratidza kuti sesamol inoderedza zvakanyanya kutorwa kwetracylglycerol. Sesamol inoshandiswawo kudzora akakwira cholesterol mazinga.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti sesamol yekuwedzera inowedzera cholesterol kuburitsa pamwe nekuderedza kunwa kwayo.
VI. Metabolic syndrome uye kufutisa.
Sesamol inonzi iine akasiyana siyana ehupenyu kugona kusanganisira kugona kudzosera kufutisa uye metabolic kusagadzikana. Zvinonzi zvinogona kudzivisa anti-kufutisa mhedzisiro.
Tsvagiridzo yakaitwa kuyedza kuti inoshanda sei sesamol pane kufutisa, zvakawanikwa kuti inogona kudzora hepatic lipid metabolism. Izvi zvakazogadzirisa insulin kuramba uye kuwedzera uremu. Kufutisa pamwe nehukama hwayo hwakanangana ne metabolic hwakabatana zvakanyanya neiyo lipid inoungana mukati memuviri. Kuderedzwa kuunganidzwa zvinoreva kudzosera kumashure kufutisa maitiro.
Sesamol shandisa inowedzera lipolysis, fatty acid oxidation uye kudzikisira mwero we hepatic lipogenesis, zvakakosha zvinhu mukuderedza lipid kuunganidza. Izvi zviitiko (kureva kutora lipid, synthesis uye catabolism) zviri pakati pezvakawanda zvinoitika muchiropa.
Vanhu vanoshandisa sesamol vakashuma zvirinani hepatic uye serum lipids profiles, uye zvakare yakavandudza insulin senzwi.
vii. Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, uye osteoporosis.
Kunyangwe rheumatoid arthritis, inorwadza uye isingagumi autoimmune chirwere, ine akati wandei ekurapa kwemakemikari, kwavo-kushandisa kwenguva refu kazhinji hepatotoxic. Sesamol inogona kunge ingangoita mushonga wepanyama. Zvidzidzo zvakaongorora zvakafanana zvakataura kuti sesamol ine zvirinani anti-arthritic uye anti-kuzvimba mhedzisiro iyo yakanyatso gonesa mhedzisiro ye rheumatoid arthritis.
Osteoarthritis ndicho chinhu chikuru chinokonzera kurwadza kwemajoini, inofungidzirwa kuti inokanganisa chikamu chegumi neshanu chehuwandu hwepasi rose. Kushushikana nekushushikana, zvisinei, kune chikamu chakakura mukusanzwanana kwemhasuru kusagadzikana. Tsvagurudzo yemhedzisiro yesesamol pane osteoarthritis-inosanganisirwa marwadzo akabatana yakaratidza kuti kutora sesamol yekuwedzera kwevhiki kunogona kudzikamisa marwadzo. Izvi zvinofungidzirwa kune anti-oxidative kusagadzikana kwepfuma yesesamol.
Masayendisiti akagumisa kuti maitiro akafanana neaya postmenopausal osteoporosis anga aenda kukonzera ovariectomy, uko kune kufambira mberi kurasikirwa mukurema kwepfupa uye simba. Saka zvakaonekwa kuti kurasikirwa kwepfupa kunonyanya kukosheswa neestrogen. Sesamol inonzi inosunga kune esrogen receptors uye inokamisa esrogen-inopindura majini echinyorwa. Mhedzisiro inobatsira inosimudzira simba repfupa nekugadzira mapuroteni emapuroteni.
viii. Alzheimer chirwere, kushushikana uye sitiroko.
Chirwere cheAlzheimer kufambira mberi kwehuropi kukanganisika kunokonzerwa nehuropi maseru kupera. Inowanzo bvisa kusununguka kwepfungwa kwevanhu vakanganiswa. Iyo neuroprotective mhedzisiro yesesamol yakanzi inovimbisa. Chidzidzo chakagadzirirwa kujekesa kugona kwekurapa kwesamol mune pfari, chiitiko chakabatanidzwa zvakanyanya nekukanganisa kwekuziva uye kushushikana kweiyo oxidative. Tsvagiridzo iyi yakagumisa kuti sesamol yakabata zvinokonzeresa kurwisa sitiroko, kukanganisika kwekuziva, kufenda, uye kushushikana kweiyo oxidative. Sesamol kushandisa antiepileptic mishonga inogona kubatsira.
[a]. Sesamol Anti-oxidant migumisiro
Oxidative kushushikana kunoitika kana paine kusaenzana mune yemahara radicals 'kugadzirwa uye antioxidants mumuviri. Izvi zvinowanzo kutungamira kukuvadzwa kwesero uye kushushikana kweiyo oxidative kunoonekwa seicho chinokonzera kukanganisika kwakawanda.
Kushushikana nekushushikana asi zvakadaro chiitiko chemuviri chinotungamira mukukwegura.
Antioxidants kune rimwe divi zvinhu zvinodzivirira kukuvara kwemasero nekuda kwemahara radicals. Ivo vanowanzo daidzwa mahara radicals scavenger.
Sesamol ndiyo yakasimba uye yakasimba antioxidant chikamu cheesame mafuta. Inoshanda kuburikidza nenzira dzakasiyana kuendesa antioxidant mhedzisiro. Idzi nzira dzekuita dzinosanganisira kukwirisa-kudzora kwakakosha antioxidant zviitiko, kudzivirirwa kweDNA kubva kukuvadzwa nemwaranzi, kutsvaira mahara radicals, inhibiting lipid peroxidation, uye kudzivirirwa kubva kune ultraviolet radiation.
Chidzidzo chekuongorora radioprotective chiitiko cheesamol kurwisa gamma irradiation muDNA. Kukuvara kweDNA kunounzwa nekuunza imwechete- kana yakapetwa-yakapetwa mabhureki kuburikidza nechizvarwa chemarudzi eoksijeni anoshanda.
Sesamol yakawanikwa ichitadzisa imwe-yakadzvanywa DNA mabhureki. Izvo zvakare zvakadzora iwo mazinga eanowanikwa emahara radicals chaizvo iyo hydroxyl, DPPH, uye ABTS radicals, ayo ese aive akabatanidzwa kune akaunzwa kamwe- kana maviri-akapatirwa mabhureki.
[b]. Sesamol Anti-kuzvimba zvinobatsira
Kuzvimba chiitiko chechisikigo chemuviri chinoshandiswa nemuviri kurwisa vamiriri vekunze senge mabhakitiriya, fungi, kana kunyange kukuvara. Nekudaro, kuzvimba kusingaperi kunokuvadza mumuviri sezvo kuchitungamira kumatambudziko akasiyana siyana.
Maanti-anogumbura anobatsira kuchengetedza muviri kubva kukuvara nekurwisa kuzvimba. Sesamol inoshanda kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana dzekupa inopesana nekuzvimba mhedzisiro. Idzi nzira dzekuita dzinosanganisira kudzvinyirira maseru ekudzivirira, kudzikisa kugadzirwa kwe nitrites pamwe nekudzvanyirira chiitiko uye nzira dzinopisa.
Mune ongororo yemakonzo ane lipopolysaccharide LPS-inokonzeresa kukuvara kwemapapu, sesamol yakawanikwa ichidzvinyirira anti-kupisa cytokines pamwe nekutadzisa kugadzirwa kwe nitric oxide uye prostaglandin E2 (PGE2). Sesamol yakawanikwawo ichisimudza-adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) activation. Izvi zvinobatsira kudzora kuzvimba uye zvakare kudzikisira kukuvara kwesero.
[c]. Sesamol anti cancer migumisiro
Sesamol ine zvivakwa zvinobatsira kurwisa maseru ane gomarara anosanganisira anti-proliferative chiitiko kuburikidza nenzira dzakasiyana dzakadai sekudzivirira membrane mukana, kusunga kukura kwesero pamatanho akasiyana pamwe nekukonzera apoptosis.
Mune chidzidzo chinosanganisira DLD-1 yemunhu kenza yemukenza masero mutsara, sesamol yakashandiswa pachiyero che12.5-100 μM. Izvo zvakawanikwa kuti COX-2 chiitiko chekunyora chakaderera ne50%.
Mune kumwe kuongorora, sesamol yakashandiswa padanho repamusoro re 0.5-10 mM yakawanikwa ichikonzera apoptosis muHCT116 nekuwedzera masisitimu anoshanda eoksijeni (O2 • -) nenzira inoenderana nedosi. Izvi zvakatungamira mukuitwa kweiyo JNK yekuratidzira nzira iyo inokurudzira kukuvara kwemitochondrial. Izvi zvinobva zvaguma mukuburitswa kwe cytochrome c iyo inozopedzisira yashandura caspase nokudaro ichikonzera apoptosis.
[d]. Seasomol Anti-mutagenic migumisiro
Mutagenicity inoreva kugona kwemumiriri (mutagen) kukonzera shanduko. Shanduko inova shanduko mumagene echisimba inogona kukonzera kukuvara kwemasero uye inoonekwa seinokonzera zvimwe zvirwere zvakaita segomarara.
Sesamol yakaratidzirwa kuve ine yakasimba anti-mutagenic zvivakwa. Yayo anti-mutagenic mabhenefiti anonzi anoitwa kune antioxidant chiitiko uye zvakanyanya saka kugona kwekutsva mahara radicals.
Mune chidzidzo, mutagenicity yakakurudzirwa nechizvarwa cheoksijeni radicals ne tert-butylhydroperoxide (t-BOOH) kana hydrogen peroxide (H2O2). Sesamol yakawanikwa iine yakasimba anti-mutagenic mhedzisiro muAmes muedzo weTRA100 uye TA102. Rudzi rwe TA102 rwunozivikanwa kunge rwunonyanya kukoshesa mhando dzemweya weoksijeni. Sesamol yakaratidzirwawo kudzvinyirira iyo mutagenicity yesodium azide (Na-azide) mune TA100 tester strain.
[e]. Sesamol Protection kubva pamwaranzi
Radiation inoreva simba rinofamba riri mafungu kana zvidimbu. Radiation inogona kuitika zvakanyanya munzvimbo yedu. Nekudaro, radiation ionizing inogona kukuvadza kana ikasiiwa isingadzorwe. Kuratidzwa kwenguva pfupi nemwaranzi kunogona kutungamira kuzvirwere zvakanyanya sekurwara nemwaranzi uye kupisa kwezuva.
Kuwedzeredzwa kwekuratidzwa nemwaranzi kunokonzera kusagadzikana kwakanyanya kusanganisira kenza uye chirwere chemoyo.
Mune ongororo yemakonzo ane radiation-inokonzeresa kukuvara kweDNA, sesamol yakaongororwa nebasa rayo rekudzivirira kurwisa radiation. Kugadziriswazve kwemakonzo nesesamol kwakakonzera kudzivirirwa pakurwiswa nemwaranzi inokonzerwa neDNA
Sesamol inonzi yakapa chengetedzo kune yemoyo kubva mukukuvara.
Mune chidzidzo chekuongorora mikana yekudzivirira yesamol inopesana nekukuvara kwemyocardial, sesamol prereatment yakapihwa pa (50 mg / kg) yakaitwa kwemazuva manomwe nguva yekuvhiya isati yasvika.
Chidzidzo ichi chakawana kuti sesamol yakadzora zvakanyanya saizi, yakashandura mamaki emoyo, yakadzivirira lipid peroxidation, neutrophil infiltration pamwe nekusimudza iyo antioxidants level. Zvakanzi sesamol powder inotungamira mukudzikira kwemajini ekudzivirira, Caspase-3 apoptotic mapuroteni , uye zvakare yakawedzera chiitiko che anti-apoptotic Bcl-2 protein.
[g]. Sesamol Mahara radicals kubiridzira
Mahara radicals maatomu asina kugadzikana ayo anowana nyore maerekitironi kubva kune mamwe maatomu. Izvo zviviri zvinobatsira uye zvine chepfu zvinoenderana neyakaiswa pfungwa. Pamazinga akaderera emahara mahara radicals anotamba chinhanho mumhinduro dzemuviri, zvisinei, kana iko kusungwa kwavo kwakanyanya kukwirira vanova kunokuvadza. Mahara radicals anovandudza oxidative kusagadzikana kunogona kukuvadza maseru uye kunogona kukonzera kusingaperi uye kusagadzikana kusagadzikana senge kenza, hosha yemoyo, uye arthritis, cataract, uye neurodegenerative hosha.
Miviri yedu inopesana nemhedzisiro yekushushikana nekushushikana nekuburitsa antioxidants zvisinei kuti inogona kusakwana uye inoda kuwedzererwa kuburikidza nezvikafu kana zvinowedzera.
Sesamol ine 'kugona kudzivisa kuumbwa kwemahara radicals pamwe nekutsvagisa mahara radicals.
Mune chidzidzo chinosanganisira kugadzirwa kwevanhu ganda dermal fibroblast vakuru maseru (HDFa) akafumurwa kuUVB, sesamol prereatment yakaongororwa ichipesana ne cytotoxicity, intracellular reactive okisijeni marudzi (ROS) mazinga, lipid peroxidation, antioxidant chinzvimbo, uye oxidative DNA kukuvara. Sesamol yakawanikwa ichideredza zvakanyanya lipid peroxidation, cytotoxicity, intracellular ROS, uye oxidative DNA kukuvara mune yemunhu ganda dermal maseru. Izvi zvakapihwa kugona kwesameol yekuwedzera kukwenya ROS.
Chidzidzo ichocho chakaratidza kuwedzera enzymatic uye isiri-enzymatic chiitiko chinopa kuita zviri nani antioxidant chiitiko.
[h]. Inoderedza cholesterol yeropa
Ropa cholesterol mafuta-akafanana, waxy chinhu mumuviri wako. Inodiwa nemuviri kuvaka maseru ane hutano asi muhuwandu hwakakodzera. Cholesterol inotakurwa pamhando mbiri dzemapoprotein, yakaderera-density, uye yakakwira-density. Saka zvinounza mhando mbiri dzecholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, uye high-density lipoprotein (HDL) cholesterol.
Iyo LDL inowanzo kunzi yakashata cholesterol kubva pamwero wakakwira weLDL wedzera mukana wako wecoronary arteri chirwere uye zvimwe zvirwere.
Sesamol inogona kudzikisa huwandu hwecholesterol pamwe neiyo triacylglycerol mumuviri.
Mukuyedzwa kwemafuta kushivirira, sesamol (100 uye 200 mg / kg) yakawanikwa zvakanyanya (P <0.05) inoderedza kunwiswa kwetriacylglycerol nokudaro ichideredza mwero we triacylglycerol mumuviri. Triacylglycerol ndicho chinhu chikuru chemafuta chakachengetwa munyama yedipose.
Mune ongororo yeSwiss albino mbeva ine indlosed hyperlipidemia, sesamol yekuwedzera pa50 uye 100 mg / kg yakanzi inoderedza mwero wecholesterol uye triacylglycerol zvakanyanya.
Basa reesamol rinodzora cholesterol uye triacylglycerol mazinga anoenderana nekukwanisa kwayo kudzikisa kunwa pamwe nekuwedzera kubuda kwecholesterol.
[i]. Sesamol inobatsira ganda
Ganda remunhu chikamu chakakosha chehurongwa hwehuwandu hwesimba iro basa rekutanga kupa chengetedzo kunhengo dzemuviri.
Sesamol inobatsira ganda munzira dzakasiyana nekuda kwesimba rayo zvinhu zvinosanganisira antioxidant, uye anti-kupisa chiitiko. Sesamol inobatsira ganda ne
· Kuchengetedza ganda kubva kumagetsi e-ultraviolet (UV)
Kugara kwenguva refu nechiedza chezuva kunogona kutungamira kuchizvarwa chisina kujairika cheakisijeni (ROS), iyo inogona kukonzera kukuvara kweganda senge collagen kudzikisira mu dermis uye hyperplasia yepidermis.
Sesamol inokwanisa kutsvagisa mahara radicals anoitika nekuda kwekureba kwenguva muchiedza chezuva nekudaro inodzivirira ganda kubva kune radiation radiation kukuvara. Inopa unodzivirira unodzivirira iyo ganda kubva mukukuvadzwa nemwaranzi ye UV.
Zvidzidzo zvinorondedzera kuti sesamol inogona kudzikisira UVB-irradiation-inosimudzira cytotoxicity. Inonzi zvakare inhibit melanin biosynthesis nekudzikisa kutaura kwe tyrosinase, MITF, TRP-1, TRP-2, uye MC1R mumaselan-a masero.
Chimwe chidzidzo chakawana kuti sesamol inogona zvakare kutadzisa melanin synthesis nekukanganisa iyo CAMP / protein kinase A (cAMP / PKA), protein kinase B (AKT) / glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) / CREB, TRP-1, uye MITF muB16F10 masero
· Batsira kuchengetedza ganda rinopenya
Sesamol inozivikanwa kuva yakasimba antioxidant. Inopinda mukati meganda nekudaro inovaka ganda. Izvi zvinobatsira kuwana ganda rinopenya.
· Inobvisa acne
Acne mamiriro ezvinhu apo ganda rema pores rakavharwa nemafuta, tsvina, uye zvimwe zvinokuvadza hutachiona.
Sesamol ine zvinhu zvinorwisa mabhakitiriya zvinoita kuti zvikwanise kubvisa utachiona saka unowana ganda risina acne.
· Inopa zvinopesana nekukwegura mhedzisiro
Kukwegura kuita zvine mwero uye kuenderera kwehupenyu. Zvisinei kukwegura kusati kwasvika kunogona kuitika nekuda kwezvinhu zvinoverengeka zvakaita sekuratidzwa kwenguva refu kumwaranzi ye UV, oxidative kusagadzikana pakati pevamwe.
Sesamol inopa yakasimba antioxidant chiitiko chinodzivirira ganda nemuviri kubva kumaseru oxidation pamwe nekuvandudza kugadziridzwa kweganda.
Sesamol inonziwo inodzivirira kuitika kwemitsara, pores, uye kuunyana.
[j]. Sesamol inobatsira bvudzi
Iko kushandiswa kwemisoro yesesame mafuta kunovaka ganda remusoro, bvudzi follicles, uye shafts. Izvi zvinokurudzira kukura kwebvudzi zvine hutano. Inobatsirawo mukuporeswa kwechinhu chakakanganiswa mumusoro nemakemikari panguva yekurapwa kwebvudzi kana kudhaya.
Kuchena bvudzi kusati kwaitika kunogona kuitika nekuda kwekudzikira kwesimba remuviri kugadzira melanin yakakwana, pamwe nezvimwe zvinhu zvakaita sekushushikana kweiyo oxidative, mararamiro ekushandura majini kusanganisira kudya pamwe nekushandisa zvinodhaka.
Sesamol yekuwedzera yakaratidza kuti inokwanisa kuchengetedza vhudzi rebvudzi pamwe nekusvibisa iro ratove rachena bvudzi.
Kunze kwezvo, sesamol inogona kubatsira kubvisa dandruff. Dandruff inogona kuitika nekuda kweganda rakaoma, zvinokonzeresa kugadzirirwa kune zvigadzirwa zvebvudzi, uye fungus kukura pachikanda pakati pezvimwe zvinhu. Sesamol inobatsira kusimbisa ganda nekudaro ichengetedze ganda rine hutano nekudaro inodzivirira kuitika kwenyuchi. Iyo inorwisa mabhakitiriya chiitiko zvakare inovimbisa kuti ganda remusoro harina hutachiona hunokonzeresa kudzimba.
Nzira nhatu dzekugadzira dzesamole
①. Kubvisa kubva kuSesame mafuta
Sesamol synthesis kubva kuSesame mafuta ndiyo yakapusa pane nzira nhatu. Nekudaro, zvinodhura zvakanyanya. Saka nzira iyi haina kukodzera kugadzirwa kwemaindasitiri, kunyanya nekuda kwemitengo yakakwira yekugadzira.
②. Synthetic synthesis inotangira piperamine
Kunyangwe iri yehupfumi ehupfumi pachiyero chikuru Sesamol Production, iyo nzira yese yesamol synthesis kubva piperamine inoshanda kune chidiki kugadzirwa apo hydrolysis uye hydrolysis maitiro anoshanda. Mune zviitiko zvakadaro, kugadzira kwe pigment semhedzisiro yekusangana uye kusangana nekuita hazvidzivirirwe.
③. Semi-synthetic nzira inotangira kubva kujasmonaldehyde
Semi-synthetic nzira inotangira kubva kuJasmonaldehyde ndiyo inonyanya kushandiswa sesame phenol synthesis maitiro kusvika kune maindasitiri zvinangwa. Maitiro acho anosanganisira oxidation uye hydrolysis uye nekuda kweizvozvo, sesame phenol yepamhepo ndeyemhando yepamusoro uye yakakura mavara.
Maitiro acho anoshandisa inodhura-inodakadza oxidant uye inoshanda yekudzora tekinoroji, inogonesa nekukurumidza kupatsanura kwechigadzirwa kubva kunzvimbo yekuchera. Izvi zvinoderedza mukana weparutivi kuita zvinoitika zvakanyanya. Ndosaka chigadzirwa chekupedzisira (chichena sekristaro) chiri chemhando yepamusoro maererano neruvara uye sesamol kuwanda.
Kupi tenga sesamol
Sesamol powder inowanikwa online kubva kune akasiyana sesamol vagadziri. Vazhinji vashandisi veesamol vanotenga kubva kwakasiyana Websites, zvimwe zvekutengesa kana zvekutengesa.
Tarisa uone kuvimbika kweese sesamol mugadziri uchishandisa yakatsanangurwa mitemo yenyika usati watenga.
Joo Yeon Kim, Dong Seong Choi naMun Yhung Jung "Antiphoto-oxidative Chiitiko cheSesamol muMethylene Blue- uye Chlorophyll-Yakagadziriswa Photo-oxidation yeMafuta" J. Agric. Chikafu Chem., 51 (11), 3460 -3465, 2003.
Kumar, Nitesh & Mudgal, Jayesh & Parihar, Vipan & Nayak, Pawan & Nampurath, Gopalan Kutty & Rao, Chamallamudi. (2013). Sesamol Kurapa Kunoderedza Plasma Cholesterol uye Triacylglycerol Levels muMouse Models eAcute uye Asingaperi Hyperlipidemia. Lipids. 48. 633-638. 10.1007 / s11745-013-3778-2.
Majdalawieh, AF, & Mansour, ZR (2019). Sesamol, yakakura lignan mune sesame mhodzi (Sesamum chiratidzo): Anti-kenza zvivakwa uye maitiro ezviito. European Journal yePharmacology, 855, 75-89.DOI: 10.1016 / j.ejphar.2019.05.008.
Ohsawa, Toshiko. "Sesamol uye sesamol se antioxidants." Nyowani Chikafu Indasitiri (1991), 33 (6), 1-5.
Sesamol Archived 2010-01-14 kuWayback Machine paChemicalland21.com
Wynn, James P.; Kendrick, Andrew; Ratledge, Colin. "Sesamol sechinodzivirira kukura uye lipid metabolism muMucor circinelloides kuburikidza nemaitiro ayo pane enzyme yemalic." Lipids (1997), 32 (6), 605-610.